စိတျဓာတျအမှခေံဆိုတာဘာလဲ? နှလုံးသားလှသူမြားဖွဈဖို့ဘာလို့စိတျဓာတျအမှခေံကောငျးဖို့ အရေးကွီးတာလဲ?
ကမ်ဘာကွီးတဈခုလုံးကို စခရငျ(Screen) လေးတဈခုတညျးနဲ့ ခြိတျဆကျလို့ရလာတဲ့ခတျေကွီးမှာ လူသားတိုငျးရဲ့ ဦးနှောကျဖှံ့ဖွိုးမှုနှုနျးက အဆတဈရာမွငျ့မားလာကွပါတယျ။ ဉီးနှောကျတံခါးပေါကျတှပှေငျ့လာတဲ့အခါ နှလုံးသားတံခါးတှကေ အလိုလိုပိတျသှားတတျကွပါတယျ။
ကိုယျကြိုးတဈခုတညျးကိုပဲ ကွညျ့တတျကွတဲ့လူတှမြေားလာတာနဲ့အမြှ လူမှုအဖှဲ့အစညျးကွီးမှာ မလိုလားတဲ့ပွဿနာတှအေမြားကွီးဖွဈပျေါလာရပါတယျ။
ဒီလို ကိစ်စရပျတှကေိုတားဆီးဖို့အတှကျဆိုရငျ လူသားတဈယောကျစီတိုငျးနှလုံးသားတံခါးတှကေို ဖှငျ့ထားနိုငျဖို့လိုပါတယျ။ နှလုံးသားတံခါးတှေ ဖှငျ့ထားမှ လူသားခငျြးစာနာထောကျထားမှု ( Humanity ) တှမွေငျ့လာမှာပါ။ ဒီတော့ နှလုံးသားတံခါးတှဖှေငျ့ပွီး နှလုံးသားလှသူမြားဖွဈဖို့ စိတျဓာတျအမှခေံဆိုတာကို ဆကျပါမယျ။
နညျးပညာတှတေိုးတကျလာလို့ ဦးနှောကျတံခါးတှဖှေငျ့ပွီး လလေ့ာသငျယူနကွေတော့ နှလုံးသားတံခါးတှကေို ပိတျမိထားကွတယျ လို့ အထကျမှာဆိုခဲ့ပါတယျ။ ဒီလို နှလုံးသားတံခါးတှေ ပိတျမိထားတာကို သတိထားမိဖို့ လိုအပျတာ စိတျဓာတျအမှပေါ။ ရှိသငျ့တဲ့ ပငျမအရငျးခံစိတျဓာတျအမှကေောငျးမရှိရငျ သငျ့ရဲ့ နှလုံးသားတံခါးလုံးဝပှငျ့လာမှာ မဟုတျပါဘူး။ ဒါကွောငျ့ စိတျဓာတျအမှခေံကောငျးဖို့ အရေးကွီးပါတယျ။
စာမြားမြားဖတျပါ။ ရသစာပလေိုကျစားပါ။ လူတိုငျးလူတိုငျး ဘယျသူမှ ရသနဲ့ ရှောငျဖယျနလေို့မရဘူး။ ရသတနျဖိုး (Aesthetic Value ) ဆိုတာကို နစေ့ဉျဘဝနဲ့ ယှဉျတှဲနိုငျစှမျးရှိလာတဲ့အခါ သငျက နှလုံးသားလှသူတဈဦးဖွဈလာမှာ အသအေခြာပါပဲ။
အခုလို လကျတဖဝါးစာသာသာရှိတဲ့ ပွူတငျးပေါကျလေးတဈခုကနေ ကမ်ဘာတဈခုလုံးမှနှေောကျရှာနိုငျတဲ့ခတျေကွီးမှာ ကိုယျ့အတှကျ မလိုလားအပျတဲ့ ဆူညံသံတှေ( Noise ) တှကေလညျး ဒလဟော ကိုယျ့ဆီဝငျလာတတျပါတယျ။ ဒါတှကေို ရှောငျဖယျနိုငျဖို့အတှကျ ရသတနျဖိုး (Aesthetic Value )လိုအပျတာပါ။
ဒါကွောငျ့ ခတျေပညာတတျလူငယျတိုငျးအနနေဲ့ ဦးနှောကျတံခါးနဲ့ နှလုံးသားတံခါး ကို ဟနျခကျြညီညီဖှငျ့ထားတတျဖို့ လိုပါတယျ။
လူပီသတဲ့ ထူးခြှနျလူငယျတိုငျး နှလုံးသားလှဖို့အတှကျ စိတျဓာတျအမှခေံကောငျးကွပါစေ။
စာကိုး- မောငျခငျမငျ(ဓနုဖွူ ) - “ စိတျဓာတျအမှခေံပညာအမှခေံ”
စိတ်ဓာတ်အမွေခံဆိုတာဘာလဲ? နှလုံးသားလှသူများဖြစ်ဖို့ဘာလို့စိတ်ဓာတ်အမွေခံကောင်းဖို့ အရေးကြီးတာလဲ?
ကမ္ဘာကြီးတစ်ခုလုံးကို စခရင်(Screen) လေးတစ်ခုတည်းနဲ့ ချိတ်ဆက်လို့ရလာတဲ့ခေတ်ကြီးမှာ လူသားတိုင်းရဲ့ ဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးမှုနှုန်းက အဆတစ်ရာမြင့်မားလာကြပါတယ်။ ဉီးနှောက်တံခါးပေါက်တွေပွင့်လာတဲ့အခါ နှလုံးသားတံခါးတွေက အလိုလိုပိတ်သွားတတ်ကြပါတယ်။
ကိုယ်ကျိုးတစ်ခုတည်းကိုပဲ ကြည့်တတ်ကြတဲ့လူတွေများလာတာနဲ့အမျှ လူမှုအဖွဲ့အစည်းကြီးမှာ မလိုလားတဲ့ပြဿနာတွေအများကြီးဖြစ်ပေါ်လာရပါတယ်။
ဒီလို ကိစ္စရပ်တွေကိုတားဆီးဖို့အတွက်ဆိုရင် လူသားတစ်ယောက်စီတိုင်းနှလုံးသားတံခါးတွေကို ဖွင့်ထားနိုင်ဖို့လိုပါတယ်။ နှလုံးသားတံခါးတွေ ဖွင့်ထားမှ လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှု ( Humanity ) တွေမြင့်လာမှာပါ။ ဒီတော့ နှလုံးသားတံခါးတွေဖွင့်ပြီး နှလုံးသားလှသူများဖြစ်ဖို့ စိတ်ဓာတ်အမွေခံဆိုတာကို ဆက်ပါမယ်။
နည်းပညာတွေတိုးတက်လာလို့ ဦးနှောက်တံခါးတွေဖွင့်ပြီး လေ့လာသင်ယူနေကြတော့ နှလုံးသားတံခါးတွေကို ပိတ်မိထားကြတယ် လို့ အထက်မှာဆိုခဲ့ပါတယ်။ ဒီလို နှလုံးသားတံခါးတွေ ပိတ်မိထားတာကို သတိထားမိဖို့ လိုအပ်တာ စိတ်ဓာတ်အမွေပါ။ ရှိသင့်တဲ့ ပင်မအရင်းခံစိတ်ဓာတ်အမွေကောင်းမရှိရင် သင့်ရဲ့ နှလုံးသားတံခါးလုံးဝပွင့်လာမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် စိတ်ဓာတ်အမွေခံကောင်းဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။
စာများများဖတ်ပါ။ ရသစာပေလိုက်စားပါ။ လူတိုင်းလူတိုင်း ဘယ်သူမှ ရသနဲ့ ရှောင်ဖယ်နေလို့မရဘူး။ ရသတန်ဖိုး (Aesthetic Value ) ဆိုတာကို နေ့စဉ်ဘဝနဲ့ ယှဉ်တွဲနိုင်စွမ်းရှိလာတဲ့အခါ သင်က နှလုံးသားလှသူတစ်ဦးဖြစ်လာမှာ အသေအချာပါပဲ။
အခုလို လက်တဖဝါးစာသာသာရှိတဲ့ ပြူတင်းပေါက်လေးတစ်ခုကနေ ကမ္ဘာတစ်ခုလုံးမွှေနှောက်ရှာနိုင်တဲ့ခေတ်ကြီးမှာ ကိုယ့်အတွက် မလိုလားအပ်တဲ့ ဆူညံသံတွေ( Noise ) တွေကလည်း ဒလဟော ကိုယ့်ဆီဝင်လာတတ်ပါတယ်။ ဒါတွေကို ရှောင်ဖယ်နိုင်ဖို့အတွက် ရသတန်ဖိုး (Aesthetic Value )လိုအပ်တာပါ။
ဒါကြောင့် ခေတ်ပညာတတ်လူငယ်တိုင်းအနေနဲ့ ဦးနှောက်တံခါးနဲ့ နှလုံးသားတံခါး ကို ဟန်ချက်ညီညီဖွင့်ထားတတ်ဖို့ လိုပါတယ်။
လူပီသတဲ့ ထူးချွန်လူငယ်တိုင်း နှလုံးသားလှဖို့အတွက် စိတ်ဓာတ်အမွေခံကောင်းကြပါစေ။
စာကိုး- မောင်ခင်မင်(ဓနုဖြူ ) - “ စိတ်ဓာတ်အမွေခံပညာအမွေခံ”